Golle Wasiiro mise Kooxda Ololaha dib u doorashadda Farmaajo? | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirada ayaa ka shaqeyn doona oo kaliya u oloeynta Madaxweyne Farmaajo, si uu mar kale talada dalka ugu soo noqdo.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay magacaabay golahiisa wasiirada cusub, walow uu soo celiyey 50% wasiiradii Xasan Cali Kheyre.
Dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay marka la eego tirada wasiirada la magacaabay iyo sidoo kale waqtiga shaqo ee ay haystaan sida uu u yar yahay ay howsha tahay oo kaliya olole siyaasadeed aanu ahayd xukuumad dhisis.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa keensaday 70% wasiiradan si uu mar kale talada Villa Somalia ugu soo laabto.
Axmed oo aan magaciisa soo gaabinay, waa siyaasi Soomaaliyeed, mar uu goor dhow la hadlay Keydmedia Online, wuxuu sheegay in hadda xukuumaddan aanay ahayn mid shaqo iney qabato laga rabo, balse ay tahay mid lagu ololeynayo.
"Wey iska caddahay in Madaxweyne Farmajo uu hadda wado olole siyaasadeed, wasiirada iney beelaha ay ku matalaan keensadaan xitaa wuu ka diiday, isaga ayaa magacyo isku aadistay, kuwaasi oo uu rabo iney kala shaqeeyaan sidii uu kusoo noqon lahaa" ayuu yiri Axmed.
Sidoo kale, siyaasigan ayaa sheegay in haddii shaqo la doonayo ay wacnaan lahayd in aanba lasoo magacaabin xubno cusub oo howsha loo daayo kuwii sii waday.
Wasiirada hadda meesha ka baxay ayaa ah kuwo Farmaajo qaarkood uu la rabo iney howlo kale u qabtaan, sida C/laahi Goodax Barre oo shaqo adag kasoo qaban doona dhanka dowlad goboleedka Hirshabelle.
Hadal-haynta shacabka Soomaaliyeed ayaa ah tiro badnida wasiiradan ee xalay uu lasoo shir-tagay ra'iisul wasaare Rooble iyo sidoo kale waqtiga ay haystaan oo aad u yar.
Madaxweyne Farmaajo ayaa aad ugu xusul duubaya kusoo noqoshada Villa Somalia, isaga oo Afarta bil ee harsan uu rabo inuu ku diyaarsado cid walbo oo isaga garabsiin lahayd.
Doorka Farmaajo iyo suu xulista xildhibaannada.
Madaxweyne Farmaajo ayaan dooneyn iney kuraasta golaha shacabka iyo kan aqalka sareba ay helaan siyaasiyiinta magaca leh, isagana sida aadka ah u mucaaradsan.
Waxa uu haatan doonayaa in howlwadeenno ka tirsan Villa Somalia, dadkii isaga usoo ololeeyay iyo sidoo kale cid walbo oo uu u arko iney xilliga doorashada garab siin doonto inuu kasoo dhigo xildhibaan golaha shacabka ah.
Waxaa bilaaban doona bixinta lacagaha kuwaasi oo lasiin doono shaqsiyaadka la doonayo iney soo noqdaan xildhibaannada barlamaanka, welinana taageersan Farmaajo.
Inkastoo ay siyaasad tahay, lana filan karo in Madaxweyne Farmaajo sida uu wax u rabo in aanay u dhicin, ayaa hadana wuxuu sameyn doona wax walbo oo uu kusoo laaban karo.
0 Comments Topics: farmaajo rooble
Maxaa ka socda magaalada Mekelle oo ay la wareegeen ciidanka Itoobiya?
Gobolka banaadir: Musharraxiinta waxay u adeegaan dalal shisheeye